Ogaden News Agency (ONA) – Kumanaan kun oo geelashii Ogadeniya oo u xero oodan gumeysiga
Kumanaan kun oo geelashii Ogadeniya oo u xero oodan gumeysiga
Gumeysiga Woyanaha ah ee Ethiopia ayaa bilaabay sidii shacabka uu u gaadhsiin lahaa dhaawac xoogan isaga oo kala daggaalamaya waxyaalaha noloshooda aasasiga u ah. Shacabka Ogadeniya oo ah dad 80% ah dad ree miyi ah waxa ay noloshoodu ku tiirsantahay xoolaha nool. Gaar ahaan Geela ayaa ah xoolaha ugu badan ee shacabka Ogadeniya dhaqdaan.
Gumeysiga oo hadaba beegsanaya shacabka ree guuraaga ah waxa uu soo rogay Gibir in laga qaado xoola dhaqatada, Qorshahaas oo socon waayay kadib markii xoola dhaqatadii ay ka caageen inay yimaadaan ceelasha, waxa gumesigi mar labaad soo rogay in dhamaanba geel leyda Ogadeniya la xero oodo, lagana qaado 10 kii geelba hal.
Ciidanka woyanaha oo sharcigan qalaad fulinaya waxa bishan August uu dhulka Doolo iyo Dhanaan ku xareeyay Geeli ugu badnaa ee abid gumeysigu xero ooto.
intii udhaxaysay 1 -3 August bishan dagmada Dhanaan waxay ciidanka cadawgu kuxareeyeen geellal aad ubadan oo ay karabaa 10kii halaadba 1 hal ama 10%
5 ilaa 10 August 2013 Waafdhuug oo Doollo katirsan waxay ciidanka cadawgu kuxareeyeen kumanyaal geel ah oo ay karabaan 10 kiiba 1 ama 10%.
Qorshahan geelasha lagu xareynayo ayaa ciidamada gumeysigu fuliyeen kadib markii Ciidamo ka tirsan Saraakiisha Sare Ethiopa iyo u adeegahooda Cabdi UBO ay gooba kamid ah Ogadeniya ku tageen dayuuradaha Militariga.